Stainless Steel sandoka Fittings 3000LBS
Stainless Steel fahadiovana Fittings
Stainless Steel JAMBA FLANGES
Stainless vy taratasy kely ON FLANGES
Stainless vy faladiany FLANGES
Stainless Steel WELDING vozony FLANGES
Stainless Steel fijery & BARA
Stainless Steel COILS & fanitso
Stainless Steel fantsona & Pipes
Stainless Steel Ahitra fantsona
Stainless Steel fahadiovana fantsona
Stainless Steel miray volo Pipes
Stainless Steel BAOLINA VALVES
Stainless vy design VALVES
Nikela Alloys Stainless Steel
S 310 Stainless Steel
Ny tanjona sy ny zavatra andrasana
Duplex 2205 Stainless vy takela in thicknesses from 3/16 "(4.8mm) amin'ny alalan'ny 6" (152.4mm). Kery ny vokatry ny avo roa heny izany ny austenitic Stainless steels, dia toy izany no mamela ny mpamorona mba hamonjy lanja sy ny fanaovana ny firaka kokoa ny vola lany, rehefa ampitahaina amin'ny fifaninanana 316L na 317L.
Thicknesses Available for firaka 2205:
Firaka 2205 (uns S32305 / S31803) dia 22% chrome, 3% molybdène, 5-6% nikela, ny azota alloyed Duplex Stainless vy takela avo jeneraly, voafaritra, ary ny adin-tsaina harafesiny fanoherana fananana, ankoatra ny hery ambony sy ny fiantraikany tsara mikasika ny Fahasarotana .
Firaka 2205 Duplex Stainless vy takela manome hampiady sy ny harafesiny crevice fanoherana ambony noho ny 316L na 317L austenitic Stainless steels amin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery manimba tsikelikely. Izany koa harafesiny avo sy ny fahasimban'ny fananana harerahana ary koa ny ambany sy ambony fanitarana mafana mafana conductivity noho ny austenitic.
Firaka 2205 Duplex Stainless vy takelaka dia 22% chrome, 3% molybdène, 5-6% Nickel azota alloyed Duplex Stainless vy takela avo jeneraly, voafaritra sy ny adin-tsaina harafesiny fanoherana fananana, ankoatra ny hery ambony sy ny fiantraikany tsara mikasika ny Fahasarotana.
Kery ny vokatry ny avo roa heny izany ny austenitic Stainless steels. Izany dia mamela mpanenona mahay mba hamonjy lanja sy mahatonga bebe kokoa ny firaka mifaninana vola lany, rehefa ampitahaina amin'ny 316L na 317L.
Firaka 2205 Duplex Stainless vy takela no mety indrindra ho an'ny fangatahana nandrakotra ny -50 ° F / + 600 ° F mari-pana isan-karazany. Mari-pana ivelan'ny isan-karazany izany dia azo heverina fa mila fameperana sasany, indrindra ho an'ny welded rafitra.
1.Pressure fanaka, fiara mifono vy, TAPAKA FANTSONA, sy ny hafanana exchangers ao amin'ny orinasa fanodinana simika
2.Piping, tubing, sy ny hafanana exchangers ho ny fikirakirana ny entona sy ny menaka
3.Effluent miborosy rafitra
4.Pulp sy ny TARATASY digesters, bleaching fitaovana, sy ny tahiry-manazava ny rafitra
5.Rotors, mpankafy, zana, sy ny asa fanaovan-gazety nifindra kilasy mitambatra mitaky hery sy ny harafesiny fanoherana
6.Cargo sambo sy ny fiara mifono vy an'ny kamiao
7.Food fikarakarana fitaovana
1, dia naka fanahy ka ho entina avy araka ASTM A370 na EN ISO 6892-1 (tensile), EN ISO 6506-1 (hamafin'ny)
2, Minimum fananana voaresaka (notsapaina amin'ny efitrano mari-pana ao amin'ny longitudinal lalana)
3, dia naka fanahy nanao tamin'ny kivy ny fitaovana tsirairay isaky ny hafanana fitsaboana batch
4, fitsapana fanampiny zatra nanoratra:
5, ASTM G48A harafesiny fitsapana (amin'ny 50 ° C) Tsy hampiady (amin'ny 20x fampihebana) sy <4.0g / m2 levitra
Hakitroky (Kg / m3) 8000
Andriamby Permeability (20 ° C) <1.05
Ny Modulus Young (kn / mm2) 200
Elektrika manokana Resistance, 20 ° C (Ω-m) 0,85
Midika coefficient ny mafana fanitarana, 20-100 ° C (m / m / degC) 16.5
Manokana hafanana, 20 ° C (J / kg.K) 500
Mafana conductivity, 20 ° C (W / MK) 13.5
Adiresy: RM.1202-1203.South Tilikambo Fortune 108 Plaza, No.1839 Qixin Road, Shanghai, Shina
Miray volo Steel Sodina, Butt-Weld kiho , Stainless Steel miray volo Sodina, miray volo Sodina , maotera Ball Valve Actuators , Welding Tratry Flange ,